Huawei MediaPad M6: Nyocha nke mbadamba nkume nwere ọtụtụ ikwu | Akụkọ akụrụngwa
Mbadamba bụ ụdị ngwaọrụ nke na-adịkarị ala na ahịa, Nke a nwere ike ịbụ n'ihi ọnọdụ kachasị nke ụfọdụ ụdị yana karịa ihe niile maka obere mgbanwe n'etiti ụdị, nke na-eme ka ndị ọrụ nọrọ ogologo oge o kwere mee na nke ha nwetara. Ọtụtụ ụta dịịrị kwa smartphones nke eji ike na ikike buru ibu karịa, nke na-eme ka anyị chegharịa ma ngwaahịa dị otu a ọ bara uru.
N'oge a Anyị na-anwale Huawei MediaPad M6, kụrụ na tebụl na ahịa mbadamba na ụfọdụ ihe na-adọrọ mmasị. Nọnyere anyị ma chọpụta nyocha a dị omimi.
1 Design: Nchekwa, ezigbo
2 Akụrụngwa: Kirin na ntakịrị ihe niile
3 Multimedia ngalaba: Nnukwu afọ ojuju
4 Ihe karịrị ihe ọkpụkpọ ọdịnaya
5 Autonomy na onyinyo nke veto
Design: Nchekwa, ezigbo
Anyị na-ahụ mbadamba nke buru ibu ma buru ibu, ihe dịka 257 x 170 x 7,2 mm na panel nke 10,8-inch, ya bụ, ihe karịrị 75% nke elu bụ ihuenyo na ọkpụrụkpụ adịghị enwe anyaụfụ nke ụfọdụ smartphones dị elu. Banyere ibu ahụ, anyị nọrọ obere n'okpuru 500 gram nke na-eme ka ọ bụrụ ngwaahịa dị mma ma dịkwa mfe ibugharị yana ọkachasị iji otu aka, ihe dị ezigbo mkpa.
Size: X x 257 170 7,2 mm
Ibu ibu: 498 grams
E wuru ya na a anodized aluminom chassis ma nwere ihu igwe na ogwe osisi ojii. Anyị nwere ndị ọkà okwu anọ n'elu wee na-ekpe ikpe site na akara ngosi Huawei n'ihu, a na-eche ya nke ọma iji ya mee ọtụtụ oge. Anyị na-ahụkwa n'ihu onye na-agụ akara mkpịsị aka n'elu ihe ga-abụ ọdụ ụgbọ USB-C na n'akụkụ aka nri ala 3,5mm Jack maka ụda kachasị ụda (ee, ọ naghị etinye ekweisi na igbe ahụ). A simplistic ma mma imewe, Iji usoro a were tinye kọmpụta mkpịsị aka kọmpụta dị ka ihe ịga nke ọma.
Akụrụngwa: Kirin na ntakịrị ihe niile
Dị ka anyị kwuru, ọtụtụ n'ime protagonism nke nke a Huawei MediaPad M6 Ndi Kirin 980 na Mali G76 GPU were ya, ha abughi ihe egosiputara ma soro 4 GB nke RAM nke gha eme ndi oru obi uto.
Nlereanya Mgbasa ozi MediaPad M6
Ihuenyo 10.8 inch LCD-IPS 2K na 280PPP na usoro 16: 10
Igwefoto na-aga n'ihu 13MP na ikanam Flash
Igwefoto n'ihu 8 MP
Nchekwa 64 GB gbasaa site na microSD
Batrị 7.500 mAh na ngwa ngwa 22.5W USB-C
Usoro njikwa Achịcha 9 Akara na EMUI 9.1
Njikọta na ndị ọzọ WiFi ac - Bluetooth 5.0 - LTE - GPS - USBC OTG
Ibu ibu 498 grams
Akụkụ X x 257 170 7.2 mm
Ahịa 350 €
Linkzụta njikọ BUY Huawei MediaPad M6
Akụkụ ndị ọzọ dị na ọkwa nke ngwaọrụ a na-enweghị ihe ọ bụla, gụnyere a smart njikọ na ala nke ga-ekwe ka anyị nweta keyboards maka mbadamba na-eme ka ọ fọrọ nke nta a «kọmputa» na okwu niile (anyị erubeghị ike nwalee kiiboodu na ya price bụ gburugburu is 80).
Multimedia ngalaba: Nnukwu afọ ojuju
Ọ bụrụ na a na-akpọ ya "Media" Pad ọ ga-abụ maka ihe, anyị nwere ogwe nwere ọkụ na-enweghị atụ, yana mkpebi 2K ma ọ bụ WQXGA ka ufodu choro ikpo ya. Nke a na-enye ezigbo ojii na usoro ziri ezi agba mmeputakwa, dị ka ị pụrụ ịhụ na video analysis na-eduga a nyochaa. Ihuenyo 10,8-inch nyere anyị karịa nsonaazụ na-enye afọ ojuju, na-arụ ọrụ anyị na-arịọ nke ọma. E wezụga nke ahụ ntụpọ 16:10 A na-elekwasị anya na ya na ọdịnaya nke ihe nkiri ọdịyo, nke a na-enwekwa ekele mgbe anyị jiri nyiwe kwekọrọ.
Nke a panel nwere Ọhụụ Dolby (HDR), ma ụda ahụ adịbeghị ebe dị anya. Anọ Harman Kardon bịanyere aka na ndị okwu nwere nkwado Dolby Atmos na obi ụtọ ngwaahịa, ma na-ege ntị music na-ekiri ihe nkiri ma na-egwu egwuregwu vidio, na ụda ngalaba ọ bụ otu n'ime ndị kasị mma ngwaahịa na ya Atiya, na ikekwe kasị mma na ya price nso. Anyị na-anụ ọdịnaya ahụ n'olu dara ụda, nke doro anya na enweghị mgbagha, nnukwu mkpu nye Huawei maka ọrụ emere na ọdịyo nke ngwaahịa a.
Ihe ọzọ dị ịrịba ama bụ igwefoto bụ 13MP nwere ọkụ ọkụ, nke ahụ na-enye mma karịa nnwale anyị, yana ọnọdụ "nnukwu" nke tụrụ anyị n'anya na nke ahụ ga-abụ ezigbo mgbakwunye na ngwaahịa a.
Ihe karịrị ihe ọkpụkpọ ọdịnaya
O siri ike ịkwụsị njikọ ya site na njirimara ya dịka ngwaahịa ezubere iji rie ọdịnaya, ma anyị nwere njikọ USB-C OTG na ala nke na-agbasawanye ad infinitum ohere nke ngwa mma nke ngwaahịa a. Anyị nwekwara ibu na ogo zuru oke maka ụdị ọrụ ọ bụla. Ọ bụrụ na anyị soro ya karịa ezigbo akụrụngwa na eziokwu na ọ na-agba ọsọ Gam akporo 10 si n'aka EMUI 10.0, Anyị nwere ihe niile dị n’ime ite iji nwee ọ toolụ nnukwu ngwa ọrụ m rụpụtara nke na-achọta m mma karịa laptọọpụ ọ bụla na ọnụahịa ya.
Na kiiboodu? Huawei etinyewo ihe ngwọta na nke ahụ na keyboard ya mara mma (rere ya iche). Anyị enwetara arụpụta afọ ojuju ha abụọ na-egwu egwuregwu (PUBG na CoD Mobile) ma na-arụ ọrụ ụlọ ọrụ n'ihi ngwa ndị a na-emebu dịka Microsoft Word, Outlook na Excel.
Autonomy na onyinyo nke veto
Anyị na-amalite site na nnwere onwe, 7.500 mAh na ngwa ngwa na-akwụ ụgwọ ruo 18W (gụnyere n'ime igbe) nke na-atọ ndị ọrụ ụtọ, ihe na-erughị awa 2 iji kwụọ ụgwọ zuru ezu na ihe karịrị ụbọchị abụọ na-eri ụdị ọdịnaya niile na egwu bụ ihe anyị nwere ike ikwu site na ule anyị, ha nwere afọ ojuju, na ọkwa batrị, a kwuo ebe ngwaahịa ndị a na-adakarị, Huawei egosila na ọ maara otu esi eme ihe nke ọma na ngalaba batrị.
O di nwute na anyi laghachitere ikwu maka ngwa ahia nke Google Services na Google Apps apughi. Na nyocha anyị, ị ga - ahụ otu n'ime ihe na - erughị nkeji ise ị ga - enwerịrị ụdị ọrụ ndị a na - arụ ọrụ, mana veto a site na Trump na Google na - eme ka ahụmịhe ahụ mebie ngwa ngwa na ngwaahịa nke, dịka o mere n'oge ahụ na Huawei Mate 30 Pro , a kara aka ido onwe ya dị ka otu n'ime ndị kacha mma na okwu nke mma-price na ahịa.
N'agbanyeghị nsogbu a na-apụghị izere ezere na nsogbu nke enweghị ọrụ Google, anyị chere ihu na ngwaahịa nke ọnụahịa dị oke ọnụ na-alụ ọgụ ihu na nnukwu onye iro ahụ, iPad, dị mma karịa ụdị nha anya na ọnụahịa n'ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ akụkụ niile. N’ebe dị anya nke ọma maka ọnụ ahịa dị mma nke asọmpi ahụ, na-eti mbadamba nkume ndị ụdị ndị ọzọ gosipụtara n’oge na-adịbeghị anya ma ọ fọdụrụ naanị n’akụkụ ụfọdụ dịka ihuenyo. Huawei jisiri ike nweta ngwaahịa gbara gburugburu, mbadamba ihe dị ka euro 350 nke ị nwere ike iji rụọ ọrụ, mụọ ma nwee ọ contentụ ọdịnaya multimedia na nkwupụta dị ukwuu.
Nlepụta anya na ọmarịcha, ihe na-eguzogide ọgwụ
Kọmpat size, ìhè na obi ụtọ iji
Akụrụngwa dị ike ma na-enwu mgbe ị na-eri ọdịnaya
Ha na-akụ nzọ na ngalaba 2K karịa teknụzụ OLED
Charginggba ọsọ ngwa ngwa na 18W
Fọdụ ngwa ndị ọzọ na-efu na nkwakọ ngwaahịa ahụ
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » Huawei MediaPad M6: Nyochaa mbadamba nkume nwere ọtụtụ ihe ikwu